शक्ति र प्रेम- दसैं विशेष - कान्तिपुर समाचार
शक्ति र प्रेम
कार्तिक १, २०७७ मोमिला
तिम्रो अध्यक्षतामा भइरहेको
अचानक म हाँस्न पुगेछु
मलाई क्षमा गर ईश्वर !
हाँसोको सम्मेलनमा हाजिर छु
बाटै छेक्ने कति घाउहरूको पर्खाल
आँसुको बाढीले भत्काएर
केवल तिम्रो दर्शनार्थ
यहाँसम्म आइपुगेको छु, ईश्वर !
म त तिमीमाथि भरोसा राखेर
कतै पुगिन्छ कि भनी हिँडिरहकै छु
तर, पुग्नुको कुनै आभास छैन
यतिखेर म बिल्कुल शून्यमा छु, शून्यमा !
कतै तिम्रो शक्तिमा पनि
प्रेम बिल्कुल मुर्झाएको त होइन !
हुन त तिमी पनि एक्लो छौ ईश्वर !
जगतमा विश्वास साँचेको मान्छेमै
अन्तिम भरोसा खोज्यौ
तर, यो देशले जस्तै
शक्ति र प्रेम एकसाथ भएको मान्छे
सायद, कहिल्यै भेटेनौ !
प्रकाशित : कार्तिक १, २०७७ १४:२५